Wararka - Hal-abuurnimada nafta, oo sita safarka
Nidaamka Calaamadeynta ee S400 cirbadaha la tuuri karo
• Calaamadeynta otomaatigga ah & isku xidhka mashiinka xawaaraha Degdega ah: 400pcs / daqiiqad;
• Beenta tuubbada irbadda, quudinta usha riixista, baarka torsion & calaamadeynta qaab dhismeedka is haysta oo leh qalab tayo sare leh;
• Waa la xidhiidhi karaa ama hawl gal kaligiis ah;
• Calaamadeynta maqan, daabacaadda koodhka seegga, ogaanshaha barokicinta cinjirka cinjirka & ka saarista otomaatiga ah;
• Koodh ikhtiyaar ikhtiyaari ah, lambar daabacan, lambar laser ... cutubka daabacaadda khadka tooska ah.
• Koodh ikhtiyaar ah oo ikhtiyaari ah, lambar daabacan, lambar laser ... cutubka daabacaadda ee khadka tooska ah;
• Calaamadeynta otomaatigga ah & isku xidhka isku xidhka xawaaraha Deggan: 200pcs / daqiiqo.
Qalabka waxaa loo sameeyay isugeyn isku-dhafan oo isku-dhafan, xoojin isku-dhafan, isku-darka badbaadada isku-dhafan ama dharka dibedda oo laba jibbaaran iyo calaamadda saliingaha la sii buuxiyey. Markaad kuxirayso tuubbada irbadda otomaatigga ah iyo muraayadda otomaatigga ah ee otomaatigga ah, Waxay si otomaatig ah u dhammaystiri kartaa shaqooyinka irbadda tuubbada irbadda, quudinta usha riixitaanka, kor u qaadista isku-darka, baarka isku-darka isku-darka, dharka dibedda iyo calaamadeynta Xakamaynta xakamaynta saxda ah waxay xaqiijineysaa in fiilada caaggu aysan isbeddeleynin inta lagu jiro furitaanka, Isla mar ahaantaana, muuqaal ahaan lagu ogaado haddii usha riixdu ay ku jirto ama ay aad u adag tahay.
Qalabka baaritaanka mashiinka oo dhan si loo hubiyo kalsoonida wax soo saarka
1. Qalab lagu ogaanayo barokac baroos ka samaysan cinjir ayaa lagu rakibay saldhiga usheeda wareega, farqiga udhaxeeya xagga sare ee usha riixista iyo dusha dusha caag waxaa loo dejin karaa 0.2-0.5 ml waa shey tayo leh. Haddii ay ka weyn tahay ama ka yar tahay inta u dhexeysa qiimahan, u-qalmin ayaa la ogaanayaa.
2. Marka loo eego shuruudaha wax soo saar ee macaamilka waxaa loo dooran karaa nidaamka ogaanshaha muuqaalka, nidaamka ogaanshaha muuqaalka wuxuu qaadanayaa sumadaha Jarmalka Basler ee la soo dhoofiyo. alaab aan u qalmin inay ka digtoonaadaan ama baabi'iyaan.
Waqtiga boostada: Jan-07-2021
Top Iyo Labeler Labeler, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha,